iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #614 by rikoooo
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #615 by Dariussssss
I-A320 mega Pack, iyaqhubeka nokuqhekeka. Kuyinto engazinzile kakhulu kimi FSX, angazi ukuthi kungani.
Imikhumbi yase-Emirates, i-FPS embi kakhulu, ishayisana neyami FSX...
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #616 by Gh0stRider203
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #617 by D115
Ngingathanda ukubona iBoeing 757 enekhwalithi ye-VC esikhathini esithile esizayo. Ngicabanga ukuthi i-757 ibalekile FSX kahle.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #619 by Gh0stRider203
I-D115 ibhale: Ngingathanda ukubona i-Boeing 757 enekhwalithi ye-VC ngesikhathi esithile ngokuzayo. Ngicabanga ukuthi i-757 ibalekile FSX kahle.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #649 by julian1245
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #669 by Macca22au
Njengoba abaningi bevuselelwa ku- P3DI-4 ngangokunokwenzeka, nama-VC ngokuphelele.
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #671 by Jakedertree
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #673 by Sergiozaki
ama-Boeing 777 pls we P3D v3 / v4
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #674 by Sergiozaki